sesamol （533-31-3） orinasa mpamatsy mpanamboatra
Sesamol dia tamboho ara-boajanahary voajanahary, lignan lehibe iray, nalaina tamin'ny sesame (sesame) ary menaka sesame; ary ny votoatiny antana amin'ny sesame no avo indrindra, marika fotsy kristaly fotsy, izy io dia namorona ny fiva. Somary mora ampiasaina ao anaty rano ihany, saingy tsy mety amin'ny ankamaroan'ny menaka ..
Sesamol vovoka Base Information
anarana Vovoka sesamol
Faobe molar 138.12 g / mol
Melt Point 62 hatramin'ny 65 ° C (144 hatramin'ny 149 ° F; 335 mankany 338 K)
Tavy 21 hatramin'ny 127 ° C (250 ka hatramin'ny 261 ° F; 394 ka 400 K) amin'ny 5
Inona no Sesamol?
Ny sesamol dia fitambarana fenol voajanahary hita ao anaty menaka sesame voahodina sy masomboly masaka voaendy. Sesamol (CAS 533-31-3) dia raisina ho singa mavitrika mavitrika sy matanjaka an'ny menaka sesame izay mitana ny anjara asany amin'ny vokatra fitsaboana.
Sesame (Sesamum indicum) dia solika manan-danja ao amin'ny fianakaviana Pedaliaceae. Izy io dia raisina ho iray amin'ireo tranainy indrindra amin'ny menaka fantatra sy ampiasain'ny olona noho ny sandan'ny sakafo mahavelona fotsiny fa koa ny sandan'ny fanafody. Ny ampahany lehibe amin'ny sesame manome ny sandan'ny fitsaboana dia ny ravina sy ny menaka voa.
Ny fitambarana sesamol 533-31-3 dia hita amin'ny habetsahan'ny soritra ankoatry ny fitambaran'ny lignin misy menaka sesame, sesamin ary sesamolin. Io fitambaran'ny rano tsy voavaha io dia fihinana mahery vaika.
Ahoana ny sesamol work?
Ny Sesamol dia miasa amin'ny fomba samihafa hanolorana ireo tombontsoa ara-pahasalamana be dia be toy ny neuroprotection, effets antioxidant, anti-inflammatoire, anti-tumor, anti-radiation ary ny fikajiana radical.
Ireto ambany ireto ny maodely izay iasan'ny sesamol hahazoana ireo vokatra voalaza ireo;
I. Misoroka ny fahasimban'ny ADN amin'ny alàlan'ny adin-tsaina oxidative
Ny sesamol dia afaka manakana ny fahasimban'ny ADN amin'ny fihenjanana vokatry ny taratra. Ny taratra ionizing dia miteraka fahasimbana amin'ny sela sela amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny chromosomal aberrations sy micronuclei amin'ny sela miely.
II. Manentana ny asan'ny antioxidants manan-danja
Miasa Sesamol amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny asan'ny anzima antioksida manan-danja toy ny catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), ary ny glutathione peroxidase (GPx), izay miaraka amin'ny fiakaran'ny haavon'ny glutathione (GSH). Ireo anzima ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny sela amin'ny radika.
III. Manakana ny proteinina pro-apoptotic hanatsara ny fahaizan'ny sela
Ny proteinina pro-apoptotic dia proteinina hampiroborobo ny fahafatesan'ny sela. Izy ireo dia misy p53, caspase-3, PARP, ary ny anzima ratsy. Ireo anzima ireo dia tafiditra ao anatin'ny fahafatesan'ny sela voarindra ka mety hampihena ny fahaveloman'ny sela.
Ny Sesamol dia naseho mba hampiroborobo ny fahaizan'ny sela amin'ny alàlan'ny fanakanana ny asan'ny anzima pro-apoptotic.
IV. Fanakanana ny peroxygida lipida
Ny peroxydidia lipida dia karazana fahasimban'ny lipida mitranga noho ny fitrandrahana. Izany dia miteraka famoronana aldehydes mihetsika, toy ny malondialdehyde (MDA) sy 4-hydroxynonenal (HNE) izay miteraka fahasimban'ny sela. Ny Sesamol dia naseho mba hisorohana ny peroidididia lipida ka manome fiarovana ny sela.
V. Manakana ny famoronana radika maimaim-poana ao anatin'izany ny radical hydroxyl
Ny radikaly maimaim-poana dia fitambarana tsy mitombina izay mifandray amin'ny aretina sy ny fahanterana. Ny radical Hydroxyl no oxidants matanjaka indrindra izay miteraka aretina.
Sesamol dia mampihena ny famokarana radika maimaim-poana ao anatin'izany ny hydroxyl, α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH), ary ABTS (2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) mahery fihetsika.
VI. Manatsara ny hetsika scavenging radical
Ankoatry ny fanakanana ny famokarana radikaly malalaka, ny sesamol dia afaka mamongotra ireo radikaly maimaimpoana toy ny hydroxyl, peroxyl lipid ary radical tryptophanyl.
VII. Famerana ny sela mamaivay
Ny sesamol dia manakana ny làlam-pifandraisana mifandraika amin'ny famokarana karazam-borona mihetsika toy izany ka mampihena ny valin'ny fivontosana.
VIII. Mampihena cytokine mamaivay (TNFα, IL-1β, ary IL-6)
Nitrika oksida, vokarin'ny iNOS, dia mitarika amin'ny fivontosan'ny havokavoka amin'ny alàlan'ny fanentanana ny cytokines mamaivay, toy ny TNFα, ary ny fanatsarana ny valin'ny fivontosana. Sesamol dia manana fahaizana manakana ny famotsorana ny TNFα sy ny IL-1β.
IX. Ny fisamborana ny fitomboan'ny sela amin'ny dingana samihafa
Ny Sesamol dia naseho hamporisihana ny fisamborana fitomboan'ny sela amin'ny dingana fitomboan'ny sela isan-karazany ao anatin'izany ny dingana S sy ny dingana G0 / G1. Ny fananana sesamol miady amin'ny homamiadana noho izany dia manampy, ohatra, mampihena ny fitomboan'ny sela homamiadana.
X. Fanamafisana ny lalan'ny caspase
Ny caspases dia anzima voarohirohy amin'ny fahafatesan'ny sela voarindra. Ny Sesamol dia naseho mba hampiasana ireo làlana ireo ka hiteraka fahafatesan'ny sela mararin'ny homamiadana.
XI. Mitaona apoptosis amin'ny alàlan'ny lalan'ny intrinsika sy extrinsika
Ny apoptosis dia fizotra ara-batana izay misy ny fahafatesan'ny sela voarindra. Dingana tena ilaina izy io satria manampy ny vatana hanafoana ireo sela maty.
Sesamol dia mitaona apoptosis amin'ny fomba roa miavaka, ny fomba intrinsika sy extrinsic.
XII. Ny autofagy mitochondrial Hinders
Ny autophagy Mitochondrial dia karazana fahasimbana manokana izay manampy amin'ny fanesorana mitochondria tsy mety.
Rehefa manakana an'io fizotrany io ny sesamol dia avy eo apoptosis.
XIII. Mampihena ny haavon'ny nitrite sy neutrofil
Ny nitrites sy ny neutrofil dia mitana andraikitra amin'ny valiny mamaivay. Izy ireo dia mirotsaka amin'ny famoahana ny azota azota izay manelanelana ny valiny mamaivay amin'ny alàlan'ny famporisihana na fanakanana ny fivontosana.
Ny Sesamol dia mitana andraikitra maha-anti-inflammatoire amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny nitrites sy ny neutrophil.
Inona no sesamol ampiasaina?
Ny sesamol dia ampiasaina amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana isan-karazany ao anatin'izany;
i. Tosidra ambony.
Ny menaka sesame dia ampiasaina miaraka amin'ny fanafody tosidra vitsivitsy ho fanafody voaporofo hampihena ny tosidra.
Ny fikarohana midadasika momba ny menaka sesame dia manondro fa ny sesamol sy sesamin (lignans misy menaka sesame) dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fandrindrana ny tosidra. Ny fakana menaka sesame, mainka ny mahandro azy, mandritra ny telo herinandro dia mampihena ny tosidra ho an'ireo olona manana fiakaran'ny tosidrà ho ara-dalàna.
Nandritra ny fikarohana, ny mpitsabo dia nampanao vondrona marary mararà hypertensive (Procardia, Nefedica ary Adelta) nandritra ny 21 andro. Na dia nisy fihenana kely aza ny tsindry azon'izy ireo dia mbola tsy ara-dalàna izany. Ny menaka sesame dia nampiasaina ho solon'ny fanafody, ary notsapaina ireo marary taorian'ny vanim-potoana mitovy. Ny valiny dia nidina ara-dalàna ny tosidrany.
Nilaza ny dokotera fa ny vokatr'izany dia tena nampisy ny sesamol sy sesamin'ny menaka sesame masaka. Raha hita tamin'izany fa ny fampidirana menaka sesame amin'ny sakafo ho an'ny olona manana tosidra ambony dia mety hahomby kokoa noho ny fampidirana azy ireo fanafody.
Ireo valiny ireo dia notaterina tany amin'ny American Heart Association nandritra ny fivoriana fanao isan-taona nataon'ny International-American Society of Hypertension nataon'ny Profesora Devarajan Sankar avy ao amin'ny Annamalai University, India.
II. Sakanana ao amin'ny tsinay.
Ny fikarohana momba ny vokatry ny sesamol amin'ny tsentsin'ny tsinay dia milaza fa mety ho tsara lavitra noho ny aspirinina izy io. Amin'ny fanadihadiana momba ny colitis ulcerative, ny IBD (aretin'ny tsinay dia miteraka fahasimban'ny sela mucosal amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny rafi-pitatitra. Nandritra ny fanadihadiana natao tamin'ny voalavo, ny sesamol dia hita hanena ny asan'ny anzima miteraka fivontosana.
Na dia fantatra aza fa mamono aretin-kozatra mamaivay ny aspirinina rehefa mihinana, dia mety hitarika fivoaran'ny fery amin'ny fampiasana maharitra izany. Ny aspirinina dia miteraka ratra amin'ny gastroduedonal amin'ny famoahana ireo sela.
Ny fikarohana bebe kokoa dia manondro fa ny fidiran'ny sesamol amin'ny sesamol amin'ireo marary mijaly amin'ny fivontosan'ny tsinay kely sy ny fitsaboana mahazatra dia mampihena ny fahafahan'ny fandidiana.
Ireo antony mampidi-doza ateraky ny aretim-po kardia dia manana ampahany lehibe amin'ny fahafatesan'ny olona sy ny aretina manerantany. Izy ireo dia mety hitarika amin'ny adin-tsaina oxidative ary raha miharatsy ny fitomboan'ny karazana oksizena mihetsika, anisan'izany ny rafitra fiarovan'ny antioxidant diso.
Ny Sesamol dia mampiasa ny toetrany manohitra ny oksidia hanakanana ireo aretina atherosclectoric aretim-piaramanidina toy ny hyperkolesterolemia, hypertriglyceridemia, fatran'ny kolesterola lipoprotein ambany hakitroka ary lipoprotein avo lenta.
Ny fikarohana bebe kokoa dia nanatsoaka hevitra fa ny sesamol dia misy fiantraikany amin'ny fihenan'ny membrane sy ny lipid. Ankoatr'izay, manome fiarovana ny myocardium manohitra ny cardiomyopathy entin'ny DOX.
IV. Fitomboan'ny zaza.
Ny sesamol dia ampiasaina amin'ny lafiny fampandrosoana zaza maro. Amin'ny fandinihana samihafa, ny sesamol ampiasaina amin'ny fampihenana ny ADHD amin'ny zaza tsy manara-tsaina dia voalaza fa mandaitra kely raha ampiasaina amin'ny vola kely. Ny tsy fahampian'ny DHA dia mahazatra an'ireo ankizy manana ADHD.
Fikarohana folo mahery no nanondro tombony azo amin'ny soritr'aretina ADHA, anisan'izany ny famakiana teny, ny tsy fahalavorariana, ny fianarana an-tsary, ny fitadidiana miasa ary ny hyperactivity.
Ny zazakely dia nanotra tamin'ny menaka sesame nandritra ny efa-bolana dia nanamarika ny fitomboana sy ny fahazotoana ara-batana.
Ny Sesamol dia miasa mahomby amin'ny famenony ny fanafody diabeta hampihena haingana ny tahan'ny siramamy ao anaty. Ny fakana famenony sesamol na ny fifindrana amin'ny sakafo menaka sesame mandritra ny zava-mahadomelina diabeta dia manome vokatra tsara kokoa ho an'ny asa.
Tamin'ny fikarohana maro, ny ankamaroan'ny marary amin'ny diabeta karazana 2, ny sesamol dia mampiseho vokatra tsara. Ny iray tamin'ireo fanadihadiana dia nahitana vondrona telo, izay samy niharan'ny diabeta karazana 2. Ny vondrona iray dia niharan'ny sesamol irery, ny iray hafa amin'ny fanafody fatra isan'andro glibenclamide (Glyburide), ary ny farany ho an'ny sesamol sy Glyburide nandritra ny 7 herinandro teo ho eo.
Ny Sesamol dia voalaza fa nisy fiantraikany synergetika tamin'ny glyburide, satria ny fitsaboana mitambatra dia nampidina ny hemoglobin A1c sy ny siramamy ao anaty ra, ary tsara lavitra noho ny iray amin'ireo fitsaboana tokana.
Hyperlipidemia. Nilaza ny mpikaroka fa ny sesamol ampiasaina amin'ny fandoroana kolesterola sy lipida hafa ao anaty ra dia nitondra vokatra tsara. Tamin'ny fitsapana modely, ny fahombiazan'ny sesamol dia notsapaina tamin'ny hyperlipidemia matavy be loatra amin'ny sakafo matavy, hyperlipidemia maharitra, hypercholesterolemia ary hyperlipidemia maranitra.
Nihena ny haavon'ny triacylglycerol satria ny valiny dia nanasongadina fa ny sesamol dia mampihena be ny triacylglycerol absorption. Ny sesamol koa dia ampiasaina hanovana ny haavon'ny kolesterola avo.
Ny fikarohana dia milaza fa ny famenon sesamol dia mampitombo ny fivoahan'ny kôlesterôla ary koa mampihena ny fifohana azy.
VI. Syndrome metabolika sy ny hatavezina.
Ny Sesamol dia voalaza fa misy fahaiza-manao biolojika isan-karazany ao anatin'izany ny fahaizana mamerina ny hatavezina sy ny aretin-koditra. Voalaza fa mety hanakana ny vokatra fanoherana ny hatavezina.
Ny fikarohana natao mba hizaha toetra ny fahombiazan'ny sesamol amin'ny hatavezina, dia hita fa afaka mifehy ny metabolisma lipidie hépatika. Nanatsara ny fanoherana ny insuline avy eo ary nanamafy ny fihenan-danja. Ny fiterahana sy ny aretina metabolika mifandraika amin'izany dia misy ifandraisany amin'ny fanangonana lipida ao anaty vatana. Ny fihenan'ny fihenam-bidy dia midika hoe mihodinkodina fironana.
Fampiasana sesamol mampitombo ny lipolysis, ny fitrandrahana asidra matavy ary ny fihenan'ny lipogenesis hepatic, singa lehibe amin'ny fampidinana ny fiangonan'ny lipida. Ireo hetsika ireo (izany hoe ny fandraisana ny lipida, ny synthesis ary ny catabolism) dia anisan'ny zavatra maro ao amin'ny aty.
Ny olona mampiasa sesamol dia nitatitra piraofilida lipida hematika sy serum tsara kokoa, ary koa fahatsapana insuline nohamafisina.
VII. Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, ary osteoporosis.
Na dia mararin'ny vanin-taolana rheumatoid, aretina autoimmune maharary sy maharitra, dia misy fitsaboana simika maromaro, matetika dia hepatotoxic ny fampiasana azy ireo maharitra. Ny Sesamol dia mety ho fanafody voajanahary mety hitranga. Ny fanadihadiana natao momba izany dia nitatitra fa ny sesamol dia manana vokatra tsara kokoa manohitra ny aretin-tsaina sy anti-milaza zavatra izay manatsara ny vokatry ny aretin-tratra vanin-taolana.
Ny Osteoarthritis dia antony iray lehibe mahatonga ny fanaintainan'ny fiaraha-miasa, tombanana fa misy fiantraikany amin'ny 15% amin'ny mponina manerantany. Ny adin-tsaina oksidaty kosa dia manana ampahany betsaka amin'ny tsy fetezan'ny hozatra taolana. Ny fikarohana momba ny vokatry ny sesamol amin'ny fanaintainan'ny osteoarthritis mifandraika amin'ny fanaintainana dia nanondro ny fandraisana sesamol fanampiny mandritra ny herinandro dia mety hampihena ny fanaintainana. Izany dia vokatry ny fananana fihenan'ny anti-oxidative an'ny sesamol.
Ny mpahay siansa dia nanatsoaka hevitra fa ny dingana iray mitovy amin'ny osteoporosis aorian'ny menopause dia nanjary niteraka ovariectomy, izay misy fatiantoka mavesatra amin'ny lanjan'ny taolana sy tanjaka. Noho izany dia hita fa ny fihenan'ny taolana dia avy amin'ny estrogen indrindra. Ny Sesamol dia voalaza fa mifamatotra amin'ny receptor estrogen ary mitaona ny transcription ny gen-estrogen. Ny vokatra mahasoa dia mampiroborobo ny tanjaky ny taolana amin'ny famokarana proteinina matrix taolana.
VIII. Aretina alzheimer, tebiteby ary tapaka lalan-dra.
Ny aretin'i Alzheimer dia fahasimbana amin'ny ati-doha miandalana noho ny fihenan'ny selan'ny ati-doha. Matetika mamongotra ny fahaleovan-tena amin'ireo olona voakasik'izany. Ny vokatry ny neuroprotective sesamol dia voalaza fa nampanantena. Ny fanadihadiana dia napetraka mba hamaritana ny mety ho fitsaboana sesamol amin'ny epilepsy, toe-javatra iray mifandraika amin'ny fahasembanana ara-pahalalana sy ny adin-tsaina oxidative. Ny fikarohana dia nanatsoaka hevitra fa ny sesamol dia nitondra fiatraikany ameliorative manohitra ny lalan-dra, fahasembanana ara-pahalalana, fanintona ary ny adin-tsaina oxidative. Ny fampiasana sesamol amin'ny fanafody antiepileptika dia mety hahasoa.
[a]. Sesamol Anti-oxidant vokatry
Ny fihenan-tsakafo oksidatif dia mitranga rehefa misy ny tsy fandanjalanjana ny famokarana radika maimaim-poana sy ny antioksida ao amin'ny vatana. Matetika io dia miteraka fahasimban'ny sela sy ny adin-tsaina manimba ny otrik'aretina izay heverina ho fototry ny aretina maro.
Ny adin-tsaina oksidatifana anefa dia fizotra voajanahary ara-batana izay mitarika fahanterana ihany koa.
Ny antioxidants kosa dia zavatra misoroka ny fahasimban'ny sela noho ny radika malalaka. Matetika izy ireo dia antsoina hoe scavenger radical gratuit.
Ny sesamol no singa mahery vaika mahery indrindra sy mahery an'ny menaka sesame. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny mekanisma samihafa hanaterana ny vokatry ny antioxidant. Ireo fomba fiasa ireo dia misy ny fifehezana ireo hetsika antioksidano manan-danja, fiarovana ny ADN amin'ny fahasimban'ny taratra, fanodikodinana radikaly maimaim-poana, fanakanana ny peroxydidia lipida, ary fiarovana amin'ny taratra ultraviolet.
Fianarana iray manombatombana ny hetsika radioprotective an'ny sesamol manohitra ny fanadiovana gamma ao amin'ny ADN. Ny fahasimban'ny ADN dia entina amin'ny alàlan'ny fampidirana fiatoana tokana na roa sosona amin'ny alàlan'ny famokarana karazana oksizena mihetsika.
Ny Sesamol dia hita fa manakana ny fahatapahan'ny ADN tokana. Izy io koa dia nampihena ny haavon'ny radika afaka, indrindra ny radika hydroxyl, DPPH, ary ABTS, izay misy ifandraisany amin'ny fiatoana tokana na indroa mihombo.
[b]. Sesamol Anti-milaza zavatra soa
Ny fivontosana dia fizotra voajanahary voajanahary izay ampiasain'ny vatana hiadiana amin'ireo mpandraharaha vahiny toy ny bakteria, holatra, na ratra mihitsy aza. Saingy manimba ny vatana ny fivontosana maharitra satria miteraka aretina isan-karazany.
Ireo mpiasan'ny anti-inflammatoire dia manampy amin'ny fiarovana ny vatana amin'ny fahasimbana amin'ny alàlan'ny ady amin'ny fivontosana. Ny Sesamol dia miasa amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany mba hanomezana vokatra manohitra ny inflammatoire. Ireo fomba fiasa ireo dia misy ny fanakanana ny sela mamaivay, ny fampihenana ny famokarana nitrites ary koa ny fanakanana ny hetsika sy ny lalan-drà.
Tao amin'ny fanadihadiana momba ny voalavo misy ratra havokavoka LPS vokatry ny lipopolysaccharide, dia hita ny sesamol mba hanafoanana ny cytokines anti-inflammatoire ary koa manakana ny famokarana nitric oxide sy prostaglandin E2 (PGE2). Ny Sesamol koa dia hita fa manara-dalàna ny adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activation. Manampy amin'ny famoretana ny fivontosana ary mampihena ny fahasimban'ny sela koa.
[c]. Homamiadana fanoherana sesamol vokatry
Sesamol manana fananana izay manampy amin'ny ady amin'ny sela voan'ny homamiadana ao anatin'izany ny hetsika fanoherana ny fiparitahana amin'ny alàlan'ny rafitra maro samihafa toy ny fanakanana ny fahafahan'ny membrane, ny fisamborana ny fitomboan'ny sela amin'ny dingana samihafa ary koa ny fitaomana apoptosis.
Ao amin'ny fanadihadiana misy tsipika sela misy homamiadana DLD-1, ny sesamol dia nampiasaina tamin'ny fatra 12.5-100 μM. Hita fa nihena 2% ny hetsika fandikana an-tsoratra COX-50.
Amin'ny fanadihadiana iray hafa, ny sesamol ampiasaina amin'ny fatra avo lenta amin'ny 0.5-10 mM dia hita fa mitarika apoptosis ao amin'ny HCT116 amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny ôksizena mihetsika intracellular (O2 • -) amin'ny fomba miankina amin'ny doka. Izany dia nitarika ny fampandehanana ny làlan'ny famantarana JNK izay mandrisika ny fahasimban'ny mitochondrial. Io indray dia miteraka famoahana cytochrome c izay farany mampihetsika ny caspase ka mitaona apoptosis.
[d]. Seasomol Anti-mutagenic vokatry
Ny mutagenisity dia manondro ny fahafahan'ny agents (mutagen) miteraka fiovan'ny toetr'andro. Ny fiovan'ny nofo izay fiovana eo amin'ny ara-nofo dia mety hiteraka fahasimban'ny sela ary heverina fa miteraka aretina sasany toy ny homamiadana.
Ny Sesamol dia naseho fa manana toetra manohitra ny mutagenika mahery. Ny tombony manohitra ny mutagenika dia avy amin'ny hetsika antioksida ary bebe kokoa ny fahafaha-mikaoka radikaly afaka.
Tao amin'ny fanadihadiana iray, ny mutagenisite dia nateraky ny famokarana radical oxygen avy amin'ny tert-butylhydroperoxide (t-BOOH) na hydrogen peroxide (H2O2). Sesamol dia hita fa misy fiantraikany mahery vaika amin'ny fanoherana mutagenika ao amin'ny testes Ames TA100 sy TA102. Ny fantsom-panafody TA102 dia fantatra fa mora tohina amin'ny karazana oksizenina mihetsika. Ny Sesamol dia naseho ihany koa mba hanakanana ny tsy fiovan'ny sodium azide (Na-azide) ao amin'ny tsapan'ny tester TA100.
[e]. Sesamol fiarovana avy amin'ny taratra
Ny taratra dia manondro ny angovo mandeha amin'ny endrika onja na sombiny. Ny taratra dia mety hitranga be eo amin'ny tontolontsika. Na izany aza, ny taratra ionizing dia mety hanimba raha tsy voafehy. Ny fipoahana vetivety amin'ny taratra dia mety hitarika aretina mitaiza toy ny aretin-taratra sy sun-sun.
Ny fihanaky tratra amin'ny taratra dia miteraka fikorontanana matotra ao anatin'izany ny homamiadana sy ny aretim-po.
Tao amin'ny fanadihadiana momba ny totozy misy fahasimbana ADN nateraky ny taratra, dia nanombanana ny sesamol noho ny fiarovana azy amin'ny taratra. Ny fikolokoloana ny totozy amin'ny sesamol dia nanjary fiarovana amin'ny fahavoazan'ny ADN vokatry ny taratra.
[f]. Fitsaboana aretin-tsaina
Sesamol dia voalaza fa manome fiarovana ny aretim-po amin'ny ratra.
Tao amin'ny fanadihadiana iray hanombanana ny mety ho fiarovana ny sesamol amin'ny ratra myocardial, ny fitsaboana sesamol dia notanterahina tamin'ny (50 mg / kg) dia natao nandritra ny 7 andro talohan'ny vanim-potoanan'ny fandidiana.
Ity fandinihana ity dia nahatsikaritra fa ny sesamol dia nampihena be ny haben'ny infarct, nampiakatra ny mararin'ny fo, nanakana ny peroidididia lipida, ny fidiran'ny neutrophil ary koa ny fampiakarana ny haavon'ny antioxidants. Notaterina fa ny vovo-sesamol dia mitarika fihenan'ny fototarazo mamaivay, proteinina apoptotic Caspase-3 , ary koa nanatsara ny asan'ny proteinina Bcl-2 anti-apoptotic.
[g]. Sesamol Malalaka ny radical scavenging
Ny radika maimaim-poana dia atoma tsy miovaova izay mahazo elektronika mora avy amin'ny ataoma hafa. Sady mahasoa no misy poizina arakaraka ny fifantohany. Amin'ny ambaratonga ambany dia misy ny radikaly maimaim-poana mandray anjara amin'ny valin'ny hery fiarovan-tena, na izany aza, rehefa avo dia avo ny fifantohany dia manimba. Ny radika maimaim-poana dia miteraka fihenjanana oksidatera izay mety hanimba ny sela ary mety hiteraka korontana mitaiza sy miharatsy indrindra toy ny homamiadana, aretim-po ary aretin-tratra, aretin-tsaina ary aretina neurodegenerative.
Ny vatantsika dia manohitra ny vokatry ny fihenjanana amin'ny alikaola amin'ny alàlan'ny famokarana antioksida nefa mety tsy ampy izy ireo ary mitaky famenon-tsakafo amin'ny alàlan'ny sakafo na fanafody.
Sesamol dia manana 'ny fahaizana manakana ny fiforonan'ny radika afaka ary koa ny fanodikodinana ireo radikaly maimaim-poana.
Tao amin'ny fanadihadiana iray misy sela olon-dehibe dermal fibroblast olon-dehibe (HDFa) tratran'ny UVB, ny fitsaboana sesamol dia nohamarinina raha oharina amin'ny cytotoxicity, ny haavon'ny karazana oksizena (ROS) intracellular, ny peroididia lipida, ny toetran'ny antioxidant ary ny fahasimban'ny ADN oxidative. Ny sesamol dia hita fa mampihena be ny peroidididia lipidia, ny cytotoxicity, ny ROS intracellular, ary ny fahasimban'ny ADN oxidative ao amin'ny sela dermal amin'ny hoditra olombelona. Izany dia vokatry ny fahafahan'ny suplementa sesamol manala ny ROS.
Ny fandinihana iray ihany dia nitatitra ny fitomboan'ny fihenan-tsolika sy ny zavatra tsy anzima izay manampy amin'ny hetsika antioxidant tsara kokoa.
[h]. Mampihena ny kolesterola amin'ny ra
Ny kolesterola amin'ny ra dia singa malemy toa an'ny tavy amin'ny vatanao. Ilaina amin'ny vatana ny fananganana sela salama nefa amin'ny habetsany. Ny kolesterola dia entina amin'ny karazany roa lipoproteins, ambany-density, ary avo-density. Izy io dia mitondra karazan-kolesterola roa, kolesterola lipoprotein (LDL) ambany hakitroka, ary kolesterola lipoprotein (HDL) avo lenta.
Ny LDL dia matetika antsoina hoe ny kolesterola ratsy satria ny haavon'ny LDL mampitombo ny mety ho voan'ny aretin'ny lalan-drà sy ny aretina hafa.
Ny Sesamol dia afaka mampihena ny haavon'ny kolesterola ary koa ny haavon'ny triacylglycerol ao amin'ny vatana.
Amin'ny fitsapana fandeferana amin'ny tavy, sesamol (100 sy 200 mg / kg) dia hita fa (P <0.05) mampihena ny fihoaram-pefy triacylglycerol ka mampihena ny haavon'ny triacylglycerol ao amin'ny vatana. Triacylglycerol no singa lehibe amin'ny tavy voatahiry ao amin'ny tavy adipose.
Tamin'ny fandalinana ny totozy albino soisa izay misy hyperlipidemia, ny famenon'ny sesamol amin'ny 50 sy 100 mg / kg dia voalaza fa mampihena ny haavon'ny kolesterola sy ny triacylglycerol.
Ny fiasan'ny sesamol mampihena ny tahan'ny kolesterola sy triacylglycerol dia avy amin'ny fahafahany mampihena ny fitrohana ary koa mampitombo ny fivoahan'ny kolesterola.
[i]. Ny sesamol dia mahasoa ny hoditra
Ny hoditry ny olombelona dia ampahany tsy mitongilana amin'ny rafitra integumentary izay ny asany voalohany dia ny fiarovana ny taova.
Ny sesamol dia mandray soa amin'ny hoditra amin'ny fomba maro samihafa noho ny fananana mahery vaika ao anatin'izany ny antioxidant, ary ny hetsika anti-inflammatoire. Sesamol no mahasoa ny hoditra amin'ny
· Fiarovana ny hoditra amin'ny taratra ultraviolet (UV)
Ny fiandrasana lava amin'ny tara-masoandro dia mety hitarika ho amin'ny fihenan'ny karazana oxygen oxygen reactive (ROS), izay mety hiteraka fahasimban'ny hoditra toy ny fahasimban'ny collagen ao amin'ny dermis sy hyperplasia an'ny épermermis.
Sesamol dia mahavita manala ireo radika maimaim-poana mitranga noho ny fiparitahan'ny masoandro lava mba hiarovana ny hoditra amin'ny fahasimban'ny ADN taratra. Manolotra fonosana miaro izy io izay manampy amin'ny fisorohana ny hoditra tsy ho simban'ny taratra UV.
Ny fanadihadiana dia mitatitra fa ny sesamol dia afaka mampihena ny cytotoxisika ateraky ny UVB. Voalaza ihany koa fa manakana ny biosynthesis melaninina amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fitenin'ny tyrosinase, MITF, TRP-1, TRP-2, ary MC1R amin'ny sela melan-a.
Ny fandinihana iray hafa dia nahatsikaritra fa ny sesamol dia mety hanakana ny synthesis melanin amin'ny alàlan'ny fitaomana ny cAMP / protein kinase A (cAMP / PKA), protein kinase B (AKT) / glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) / CREB, TRP-1, ary MITF ao amin'ny B16F10 sela
· Ampio mitazona hoditra mamirapiratra
Sesamol dia fantatra ho antioksida mahery. Miditra ao anaty hoditra izy io ary mamelona ny hoditra. Io indray dia manampy amin'ny hoditra manjelanjelatra.
· Manala ny mony
Ny mony dia toe-javatra iray izay manentsina ny mason-koditra noho ny menaka, ny loto ary ny zavamiaina bitika sasany manimba.
Sesamol manana fananana miady amin'ny bakteria izay ahafahany manala ireo zavamiaina bitika, noho izany dia afaka amin'ny mony ianao.
· Manolotra vokatra manohitra ny fahanterana
Ny fahanterana dia fizotran'ny fiainana antonony sy mitohy. Na izany aza, ny fahanterana aloha loatra dia mety hitranga noho ny anton-javatra maro toy ny fiaretana lava amin'ny taratra UV, ny fihenjanana amin'ny oksidana ankoatry ny hafa.
Sesamol dia manolotra hetsika antioksida mahery vaika izay manakana ny hoditra sy ny vatana amin'ny fitrandrahana sela ary koa fanamafisana ny famelomana ny hoditra.
Ny Sesamol dia nitatitra ihany koa mba hisorohana ny fisian'ny tsipika, pores, ary ketrona.
[j]. Tombontsoa ho an'ny volo ny sesamol
Ny fampiharana topical an'ny menaka sesame dia mamelona ny hodi-doha, ny volon'ny volo ary ny hazo. Mampiroborobo ny volo salama izany. Izy io koa dia manampy amin'ny fanasitranana ny hoditra simika amin'ny simika mandritra ny fitsaboana volo na fandokoana.
Ny volon-doha volo aloha dia mety hitranga noho ny fihenan'ny fahafahan'ny vatana mamorona melanin ampy, ary koa ny anton-javatra hafa toy ny adin-tsaina oxidative, ny fomba fiaina fanovana genetika ao anatin'izany ny sakafo ary koa ny fampiasana fanafody.
Ny fanampiana sesamol dia voaporofo fa afaka mitazona ny lokon'ny volo ary manamaizina ny volo efa fotsy.
Ankoatr'izay, ny sesamol dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny dandruff. Ny dandruff dia mety hitranga noho ny hoditra maina, ny fihenan'ny alikaola amin'ny vokatra volo, ary ny fitomboan'ny holatra eo amin'ny hodi-doha miaraka amin'ireo antony hafa. Ny sesamol dia manampy amin'ny famelomana ny hoditra ka hihazona ny hodi-doha mahasalama, amin'izay manakana ny fisian'ny dandruff. Ny hetsika fanoherana ny bakteria dia miantoka ihany koa ny loha tsy misy zavamiaina bitika izay miteraka dandruff.
Fomba telo synthetic ny sesamole
①. Fanalana avy amin'ny menaka Sesame
Sesamol synthesis avy amin'ny menaka Sesame no mora indrindra amin'ireo fomba telo. Na izany aza, dia lafo be. Ka io fomba io dia tsy mety amin'ny famokarana indostrialy, indrindra noho ny vidin'ny famokarana avo.
②. Ny syntetika synthetic avy amin'ny piperamine
Na dia mety ara-toekarena ho an'ny famokarana Sesamol lehibe aza, ny làlana manontolo hahazoana ny synt synt sesamol avy amin'ny piperamine dia ampiharina amin'ny famokarana kely rehefa ampiasaina ny fizotran'ny hydrolysis sy hydrolysis. Amin'ny toe-javatra toy izany, ny fiforonan'ny pigment ho vokatr'izany ary ny fihetsika amin'ny lafiny dia tsy azo ihodivirana.
③. Làlana semi-synthetic avy amin'ny jasmonaldehyde
Ny lalana Semi-synthetic izay nalaina avy amin'ny jasmonaldehyde no dingana sesame fenol synthesis synthés be loatra raha ny resaka indostrialy no jerena. Ny fizotrany dia mirakitra ny oxidation sy ny hydrolysis ary noho io, ny fenitra sesame vokariny dia manana kalitao sy loko lehibe.
Ny fizotrany dia mampiasa teknolojia fitrandrahana oksidana lafo vidy, ahafahana manasaraka haingana ny vokatra amin'ny faritra fitrandrahana. Izany dia mampihena kely ny mety hisian'ny fihetsiky ny fiatraikany. Tsy mahagaga raha ny vokatra farany (kristaly toy ny fotsy) dia avo lenta amin'ny resaka loko sy sesamol hakitroky.
Aiza no mividy sesamol
Ny vovoka sesamol dia misy amin'ny Internet tsy mitovy mpanamboatra sesamol. Ny ankamaroan'ny mpampiasa sesamol dia mividy amin'ny hafa tranonkala, ny sasany ho an'ny tanjona antsinjarany na ambongadiny.
Hamarino ny maha ara-dalàna ny tsirairay mpanamboatra sesamol mampiasa lalàm-panjakana voatanisa alohan'ny fividianana.
Joo Yeon Kim, Dong Seong Choi ary Mun Yhung Jung "Hetsika Antiphoto-oxidative an'ny Sesamol ao amin'ny Methylene Blue- sy Chlorophyll-Sensified Photo-oxidation of Oil" J. Agric. Chem Chem., 51 (11), 3460 -3465, 2003.
Kumar, Nitesh & Mudgal, Jayesh & Parihar, Vipan & Nayak, Pawan & Nampurath, Gopalan Kutty & Rao, Chamallamudi. (2013). Ny fitsaboana sesamol dia mampihena ny kolesterola plasma sy ny haavon'ny Triacylglycerol amin'ny maodelin'ny totozy misy ny Hyperlipidemia mitaiza sy mitaiza. Lipids. 48. 633-638. 10.1007 / s11745-013-3778-2.
Majdalawieh, AF, & Mansour, ZR (2019). Sesamol, lignan lehibe amin'ny voan'ny sesame (Sesamum indicum): Toeram-piadiana anti-homamiadana ary fomba fiasa. Gazety eropeanina momba ny Pharmacology, 855, 75–89.DOI: 10.1016 / j.ejphar.2019.05.008.
Ohsawa, Toshiko. "Sesamol sy sesamol ho antioksida." Indostrian'ny sakafo vaovao (1991), 33 (6), 1-5.
Sesamol Archive 2010-01-14 amin'ny Wayback Machine ao amin'ny Chemicalland21.com
Wynn, James P.; Kendrick, Andrew; Ratogn, Colin. "Sesamol ho toy ny mpanakana ny fitomboana sy ny metabolisma lipid ao amin'ny Mucor circinelloides amin'ny alàlan'ny asany amin'ny anzima malic." Lipids (1997), 32 (6), 605-610.